Zvaunofanira kuita kana Mac yako isingazive yekunze hard drive | Ndinobva mac
Zvaunofanira kuita kana Mac yako isingazive yekunze hard drive
Iwe unosanganisa yekunze yekuchengetera mota kune yako Mac uye haina kuzviziva? Zvinogoneka kuti nedzimwe mhinduro dzatinokupa, dambudziko rinonyangarika. Zvino, zvinoitawo kwazvo kuti hapana kana rimwe rawo rinoshanda uye iwe unotove uine dambudziko nekuwedzera chiteshi chemakomputa yako kana kuti iyo yekuchengetedza svikiro haina kukwana. Tichaedza kukupa mhinduro dzinoverengeka; mamwe acho akareruka, asi pane zviitiko izvo zvinonyatsooneka pachena ndicho chinhu chekutanga chatinorasa. Kana iwe ukabatanidza hard drive kana USB memory kune yako Mac uye hapana chinoitika, mhinduro dzinogona kuve seinotevera.
1 Iyo USB tambo haisi kushanda nemazvo
2 Iwe hauna kuratidzwa kwekunze kwekutyaira muKutsvaga kwakagoneswa
3 Dzosera iyo System Management Kudzora (SMC)
3.1 MacBook laptops (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) isina bhatiri rinobviswa:
3.2 Desktops senge iMac, Mac Mini, Mac Pro:
3.3 iMac Pro (akasiyana matanho kune yakajairika iMac):
Iyo USB tambo haisi kushanda nemazvo
Rimwe rematanho ekutanga aunofanirwa kutarisa nderekuti kana paine chero chinhu chemuviri chakakanganisika mumatanho. Zvinoita kunge zvakapusa, asi pazviitiko zvakawanda - kunyanya kana tichitaura nezvechaji dzemabhatiri - tambo yatinoedza kufudza uye kuverenga iyo data haishande. Kuti, edza kubatanidza iyi hard disk kune imwe komputa uye utonge kuti iyo USB tambo ndiyo chinhu chinokundikana. Isu tinonzwisisa kuti kana iri ndangariro yeUSB, nhanho iyi inofanira kusvetwa.
Sarudzo dzekuendesa mapikicha kubva kuApple kifaa kuenda kuMac
Iwe hauna kuratidzwa kwekunze kwekutyaira muKutsvaga kwakagoneswa
Iwe unobatanidza yekunze hard drive kana iyo USB ndangariro uye wobva watarisa kuti inowana simba here nekuti chinongedzo maLED anoshanda. Usati waenderera nhanho inotevera, zvakanaka kuti uone kuti Mac inonyatso ziva chishandiso. Saka pane izvi tinoenda ku «Tsvaga», tinoenda kumenu bar uye isu tinofarira sarudzo «Go». Ipapo isu tinotara sarudzo «Enda kufolda ...» uye Mubhokisi rebhokisi rinoonekwa isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
/ Mavhoriyamu /
Kana ichidzosera mhedzisiro uye yedu yekunze hard drive kana USB memory inoonekwa pachiratidziri, iyo chikonzero iwe usingavaone pachiratidziri ndizvo zvatinokuudza pazasi.
Chimwe chikonzero nei zvisingaite kuti iwe uone chero chinhu kubva kunze zvekuchengetedza zvinhu paMac yako ndechekuti hauna chaiyo sarudzo yakasarudzwa pane yako system. Tinorevei neizvi? Zvakanaka chii iri nyore kumisikidza mukutsvaga kweT Finder uye voila.
Ndokunge, tinya pane "Tsvaga" muDock. Zvino enda kumenu bar uye tinya zvakare pa "Tsvaga" uyezve pa "Zvaunofarira". Iwe unozoona kuti kune akasiyana tabo kwaunobaya. Zvakanaka, pano zvinoenderana nezvamunoda semhedzisiro. Kana iwe uchida kubatanidza chako chekunze chengetedzo mudziyo kuti uratidzwe pane desktop, enda kuna «General» uye sarudza zvinhu zvaunoda.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuti rioneke mune yekutsvaga barbar, sarudza sarudzo «Sidebar» uye maka sarudzo dzaunoda kuratidzwa muchikamu che «Midziyo».
Dzosera iyo System Management Kudzora (SMC)
Chekupedzisira, kana pasina mhinduro dziri pamusoro apa dzakushandira, inogona kunge iri nguva yeku gadzirisa iyo manejimendi manejimendi manejimendi, inozivikanwawo seSDC. Nedanho iri zvinokwanisika kuti isu tiwane Mac yedu kuti ishande zvakare mumamiriro. Kunyangwe pairi Apple peji rekutsigira iwe uine nhanho dzese zvichienderana nerudzi rwemidziyo yauinayo, kubva kuSoy de Mas tinovaendesa pazasi:
MacBook laptops (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) isina bhatiri rinobviswa:
Sarudza Apple menyu> Shut Down
Mushure mekunge Mac yako yavhara, pinda maShift-Kudzora-Sarudzo kiyi kuruboshwe kuruboshwe rwekhibhodi yakabatanidzwa, uye panguva imwechete uchidzvanya bhatani remagetsi. Batisisa makiyi aya uye bhatani remagetsi kwemasekondi gumi
Dhinda bhatani remagetsi zvakare kuvhura Mac
Desktops senge iMac, Mac Mini, Mac Pro:
Mushure mekunge Mac yako yavhara, bvisa tambo yemagetsi
Mirira 15 seconds
Dzorera zvakare tambo yemagetsi
Mirira masekondi mashanu, wobva wadzvanya bhatani remagetsi zvakare kuti utange yako Mac
iMac Pro (akasiyana matanho kune yakajairika iMac):
Mushure mekuvhara kweMac Pro pasi, pinda uye bata bhatani remagetsi kwemasekondi masere
Regedza bhatani remagetsi uye mirira mashoma masekondi
Dhinda bhatani remagetsi zvakare kuti uvhure Mac Pro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Zvaunofanira kuita kana Mac yako isingazive yekunze hard drive
Mhoroi, ini ndakamomora dhisiki rakaomarara kubva windows 7 ine MACDRIVE 9 Pro, asi pandinoiisa muImac G5 (yakura kwazvo OS X Tiger) uye nekumhanyisa disk rekumisikidza zvinoita sekunge richashanda, asi mushure mechinguva rinowana denderedzwa pakati pechidzitiro netambo yakayambuka. Iyo hard drive yakamisikidzwa zvisirizvo? kana chii chiripo?
noe breton akadaro
Mhoroi ndine mubvunzo ini ndiri mutsva kune iyi mac pro kana apple uye mubvunzo wangu ndewekuti; Ndine mac pro 2015 uye ndinoda kuishandisa kuna dj uye dambudziko nderekuti ndine yekunze usb diski uye pandinobatanidza nekuiisa kuti itambe, ini handiwani mavhidhiyo enziyo, hapana chimwe chinouya kunze kwekuteerera uye hapana vhidhiyo, ndinovimba unondinzwisisa ndatenda
Pindura kuna no breton
inoita 8 mwedzi
Mhoro zvave zvichindibatsira, ndaive nedambudziko neUSB iyo isina kushanda uye ndakafunga kuti yaive iyo USB kusvikira ndaverenga chinyorwa ichi, maita basa kwazvo Ndakawana zvakare chirongwa kunze uko chaindibatsira kwazvo kubvisa hutachiona uye izvo zvinhu zvinogumbura zvaibuda nguva nenguva, anetsa inonzi zita.
Gadzira masiginecha eHTML nezvako zvese zvemashoko neemail Signature Unlimited
Apple inoisa 1.500 mamirioni euros ekutanga kuitira faindi yeIreland